သုံးမြို့ရှင်နတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကြက်သမားနတ်သည် မြန်မာ့မိရိုးဖလာကိုးကွယ်ကြသည့် နတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။
သုံးမြို့ရှင်ထံတွင် ပညာဗလအမတ်နှင့် သားဖြစ်သူ ခြေရာတစ်ထောင် မောင်မဲခေါင်တို့သည် အမှုထမ်းကြသည်။ တစ်နေ့သောအခါ မည်သူကမျှ ဖမ်းဆီးရန် မဝံ့သည့် တောဆင်ရိုင်းတစ်ကောင်သည် သောင်းကျန်းနေလေသည်။ ထိုဆင်ရိုင်းကြီးကို မောင်မဲခေါင်သည် ထွက်၍ ဖမ်းဆီးပြီး မင်းကြီးအား ဆက်သသဖြင့် မင်းကြီးသည် မောင်မဲခေါင်အား “စစ်ဗိုလ် − သက်တော်မြဲ” ရာထူး ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
သုံးမြို့ရှင်သည် ကြက်တိုက်ဝါသနာပါသည့် ဘုရင်တစ်ပါး ဖြစ်သည့်အတွက် ကြက်တိုက်သွားလေရာ နောက်ကျပြီးမှ ကြက်ပွဲသို့ ရောက်ရှိသွား၏။ ထိုအခါ ပြည်ဘုရင်က နောက်ကျမှ ရောက်လာသည့်အတွက် လှောင်ပြောင်၏။ ထိုအခါ သုံးမြို့ရှင်ဘုရင်သည် ရှက်စိတ်ဖြင့် “နင်ဆင်ကောက်နောက်ကျလို့သာ ငါအရှက်ရသည်” ဟု ဆိုကာ မောင်မဲခေါင်၏ မျက်နှာကို ခြေဖြင့် ကန်ခဲ့သည်။ ထိုအခါမှစ၍ မောင်မဲခေါင်သည် ရန်ငြိုးထားကာ ပုန်ကန်လေသည်။
သုံးမြို့ရှင်သည် မောင်မဲခေါင်ဖမ်းဆီးလာခဲ့သည့် ဆင်ကိုစီး၍ တိုက်ခိုက်၏။ ထိုဆင်သည် တိုက်ပွဲတွင် မောင်မဲခေါင်၏ အသံကို ကြားသည့်အခါ ထွက်ပြေးလေ၏။ မောင်မဲခေါင်သည် သုံးမြို့ရှင်ကို လှံဖြင့် လိုက်ထိုးသဖြင့် ကံကုန်ပြီး သုံးမြို့ရှင်နတ် ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ အချို့က “ကြက်သမားနတ်” ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။
ကြက်သမားများသည် ကြက်တိုက်ရာတွင် သုံးမြို့ရှင်နတ်ကို ပူဇော်ပသ၍ တိုက်ပါက နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
နတ်တင်မြှောက်ရာတွင် ကန်တော့ပွဲထဲ၌ ကြက်နှင့်ပတ်သက်သောပစ္စည်းများ ပါဝင်မှုမရှိစေဘဲ ငှက်ပျောက်သီးသုံးဖီး ပန်းသုံးမျိုး၊ ဆီမီးသုံးတိုင်၊ ကွမ်းယာသုံးယာ၊ လက်ဖက်သုံးပုံ၊ အုန်းတစ်လုံးတို့ ပါဝင်ရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ဦးထွေးဟန် (၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၇ ရက်). မြန်မာ့မိရိုးဖလာဓလေ့ နတ်သမိုင်း. အမှတ် - ၅၊ တင့်ဆန်းလမ်း၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့: ရွှေပုရပိုက်စာပေ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သုံးမြို့ရှင်နတ်&oldid=478388" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။